Allgedo.com » 2012 » November » 02
Home » Archive Daily November 2nd, 2012
War-murtiyeed kasoo baxay Ururka Sahal oo ku saabsan farogelinta Madaxwayanaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ee arimaha maamul u samaynta gobolada Jubbooyinka.
Ku: Dhammaan madaxda DF KU: Dhammaan beelaha Soomaaliyeed Og: Saxaafada madaxbanaan Og: Dawlaha IGAD, UNPOS Og: Dawlada Puntland Ururka Sahal ka dib markuu: a) U kuurgalay si dhow qiimayn iyo la socod ugu sameeyey farogelinta iyo carqaladaynta qaawan ee Madaxwayne Xasan Shiikh iyo reerkiisu ay ku hayaan arimaha maamul u samaynta gobolada Jubbooyinka; b) Arkay farogalinta madaxwayne Xasan...
Ururka Sahal oo qabtay dood culus oo ku saabsan maamul u samaynta Jubbaland (Daawo Video)
Waxaa dhawaan barnaamij loogu magac daray “Jubbaland maamul u sameynteeda” ku qabtay magaalada London ee dalka Ingiriiska Ururka Sahal, waxaana barnaamijkaas soo tabinayay Cabdiraxmaan A. G. (Shiine), ayada oo martidii lagu macsuumay in ay doodaas ka qeyb-qaataana ay ahaayeen: Ibraahin Maxamed Shiil, Cabdirashiid Maxamed Daahir, Cabdulahi Cabdisalaan Ashkir (Cabdulaahi Garoon), Cabdirisaaq...
Wadatashiyo ku aadan ka qayb galka maamul u samaynta gobolada Jubooyinka oo ay wada yeesheen xildhibaanada iyo waxgaradka beesha Sade (Mareexaan)
Muqdisho, Somalia (AOL) – Kulankan balaaran oo ay saxaafadu dibad joog ka ahayd ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo ay kaqayb qaadnayeen xildhibaanada, siyaasiyiinta, waxagaradka iyo aqoonyahanka kasoo jeeda beesha Sade (Mareexaan) iyadoo lagaga wada arinsanyey xaalada siyaasadeed ee dalka iyo weliba maamul u samaynta gobolada Jubooyinka iyo Gedo. Kulankan oo ay ka hadleen siyaasiyiin...
Mahiga: Waa in lagu heshiiyaa Xubnaha Golaha Wasiirada
Ergayga gaarka ah ee QM uqaabilsan Arimaha Soomaaliya Mahiga ayaa shaaca ka qaaday in dhawaan lasoo magacaabi doono xukumad kooban oo ay heshiis ku yihiin madaxda dowlada Soomaaliya. Isagoo kahadlayay Magaaladda Muqdisho ayaa Ergayga QM ee Soomaaliya Mahiga waxaa uu sheegay in kulamo kala duwan uu la qaatay Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha dowlada isagoo kala hadlay sidii loo soo dhisi lahaa...
Madax ka socota dowlada Soomaaliya oo Kismaayo gaaray iyo kulan xasaasi ah oo soconaya
Magaaladda Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ayaa goordhow waxaa gaaray wafdi ka socda dowlada Soomaaliya iyadoona magaaladda amaankeeda aad loo adkeeyay. Wafdigan ka socda Madaxda dowlada Soomaaliya ayaa waxaa ku jira Wasiirka gaashaandhiga dowlada Soomaaliya Xuseen Carab Ciise, Taliyaha ciidamada xooga dalka Gen C/Qadir Cali Diini iyo Madax kale oo caalami ah. Haatan waxaa ay kusugan yihiin...
Maxaa looga been sheegay taariikhda Radio Muqdisho? By Cabdiraxmaan Taysiir
Ciil-kaambi ka dhashay eex iyo caddaalad-darro ay garbinayso been-abuur lagu sameeyo taariikhda ummadda iyo waxqabadka halyeeyada ayaa wuxuu horseeday inuu qof kasta dhinaciisa ka faago bohol-dhagareed uu malahiisu ahaa inuu ku aasi doono xaq-darrada, balse sidii uu ugu mashquulsanaa qodisteeda uu ku soo baraarugay isagoo dhexda uga jira bohoshii oo uu dheereeyay. Ma awoodo inuu isbedbaadiyo, umana...